Radio FM Spain waxaa lagu casriyeeyay warar aad u xiiso badan | Wararka IPhone
Radio FM Spain waxaa lagu casriyeeyay warar aad u xiiso badan
Dhowr sano dalab tixraac ah (ugu yaraan haddii aan ku hagno qiimeynta isticmaaleyaasha iyo kan ugu sarreeya) si aan uga dhageysano raadiyaha Isbayn wuxuu ahaa Radio FM Spain. Muddo ka dib iyada oo aan la helin cusbooneysiin waaweyn, hadda waa ugu dambeyntii halkan nooc cusub taasi waxay soo bandhigaysaa qaar ka mid ah astaamaha aan inta badan ku seegi karno barnaamij sidan oo kale ah.
2 Hakad la'aan
Shaki kuma jiro kor u qaadista xiddiga ee cusbooneysiinta ugu dambeysa waa ka mid noqoshada habka habeenkii. Thanks to qaabkan waxaan ku raaxeysan karnaa arjiga oo leh mowduuc mugdi ah, oo aad uga sii wanaagsan indhaheenna xaaladaha iftiinka yar xitaa iyadoo ay ku jirto nuurka sare ee boosteejada. Maskaxda ku hay in raadiyaha si aad ah loo isticmaalo ka hor intaadan seexan, markaa muuqaalkani wuxuu ahaa horumar macquul ah oo loogu talagalay Radio FM Spain.
Dhinaca kale, nidaam ah jadwalka digniinta taas oo lagu ogeysiin karo si aanan u seegin barnaamijka aan jecel nahay. Ogeysiisyadani waa kuwo la qorsheyn karo maalmo kala duwan ee usbuuca, in kasta oo haddii aan rabno aan sidoo kale dhigi karno hal ogeysiis ah iyada oo aan lagu celin nooc kasta. Hormarinta noocan ah waa la qadarinayaa maxaa yeelay waan dhejin karnaa ogeysiisyada mana ahan inaan u adeegsanno barnaamijyo kale, taas oo ah inaan ku darno in raadiyaha u dhigma uu si otomaatig ah u furayo markaan aqbalno ogeysiinta.
Qeybta 4aad waxay umuuqataa in xasiloonida idaacadaha lahormariyay hadii ay suurta gal tahay, marka jarida raadiyeyaashu waa inay yaraadaan xitaa marka aan adeegsano barnaamijyada kale isla waqtigaas raadiyaha. Sidoo kale barnaamijka waa la hagaajiyay loogu talagalay IOS 10 waxayna si habsami leh uga shaqeysaa dhammaan boosteejooyinka, oo ay ku jiraan Apple Watch, tan iyo xawaaraha gudbinta xogta ee u dhexeysa iPhone-ka iyo saacadda Apple si weyn ayaa loo hagaajiyay.
U guurista naqshadeynta, shaqaaluhu qaababkii hore waa la ilaalinayaa oo raacaya tilmaamaha ay dejisay Apple, laakiin tan 4 version Qaar ka mid ah walxaha iyo midabada ayaa wax laga badalay, tan ugu caansan waa dayactirka astaanta oo ah nooc ka casrisan kana saxsan kii hore.
Raadiyaha FM Spain wali waa codsi bilaash ah, horumariye wuxuu na siinayaa seddex ikhtiyaar oo aan ku horumarinno: mid Rukunka Premium bilaash ah (oo leh xayeysiis), macmiil sanadle ah oo caymis ah iyo lacag bixin nolol-maalmeed ah, oo umuuqata mid macquul ah haddii aan si joogto ah u adeegsanno dalabka. Dhammaan horumarintani waxay la xiriiraan koontada, sidaa darteed waxaan ku raaxeysan doonnaa terminal kasta, maaddaama barnaamijku uu yahay mid caalami ah oo ka shaqeeya labada iPhone iyo iPad oo leh isku mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Radio FM Spain waxaa lagu casriyeeyay warar aad u xiiso badan
Apple wuxuu leeyahay shati cusub oo la xiriira aqoonsiga wajiga
8x25 Podcast: iPad-ka Cusub bisha Abriil